एनआरएन अमेरिकाको “एक्स्ट्रा लार्ज मिसन“
बुझी नसक्नु भएको छ किन यो वर्तमान एनआरएन अमेरिकालाई सदस्यता वितरणमा पटक्कै रुचि छैन? च्याप्टर गठनको ढोंग पिटे पनि किन कार्यान्वयन भएको छैन? अनि किन हामीले सदस्यता बापत तिरेको दस डलरको हिसाब अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन? र किन अघिल्ला कार्यकालहरुमा ब्रम्हलूट गरियो भनिएको हिसाब किताबको फेहरिस्त बाहिर ल्याउन सकिएको छैन? केले रोकेको छ तपाईहरुलाई?
तपाईहरुसंग "रेडीमेड" जवाफ या बहाना हुन्छ, "के गर्नु हामीले आफ्नो काम धन्दा पनि त गर्ने पर्यो", "यो त हाम्रो समाजसेवा मात्र हो" आदि इत्यादी....तर तपाईहरुले यो सत्य न मंचहरुमा बोल्नु भो न त तपाईका घोषणापत्रहरु मै इमान्दारिताका साथ उल्लेख गर्नु भोl थुप्रै आकासे सपनाहरुको फेहरिस्तले सजित तपाईका घोषणापत्रहरु अझै संचारकर्मीहरुका फायलमा सुरक्षित छन्l